पुष्पा थपलिया मंगलबार, पुस २८, २०७७, १४:०५
प्रमोद : घर बनाउनेलाई घर बनायो, रिक्सा चलाउनेलाई रिक्सा चलायो भनेर मुद्दा हाल्न पाइन्छ?
सुवास : घर बनाउनेले घरै मेरो, रिक्सा चलाउनेले रिक्सै मेरो भन्न पाइन्छ?
हालै संगित क्षेत्रमा चलेको चर्को बहस यही हो।
गायक प्रमोद खरेलले आज भन्दा ११ वर्षअघि रेकर्ड गरेको ‘प्रणय’ एल्बम रेकर्ड गरेका थिए। ८ ओटा गीत समावेश गरिएको उक्त एल्बम विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिसँगको सहकार्यमा बजारमा आएको थियो।
एल्बममा समेटिएको याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदोरहेछ बोलको गीत निकै चर्चित बन्यो। त्यो गीतपछि खरेलले सांगितिक दुनियामा कहिल्यै पछाडि फर्कनुपरेन। आफूलाई यो गीत निकै प्रिय भएको भन्दै उनले विन्ध्यावासिनी म्युजिक प्रालीसँग एल्बम फिर्ता मागेका थिए।
सुरुमा कम्पनी र गायकबीच पाँच वर्षको सम्झौता भएको रहेछ। ६ वर्षसम्मको रोयल्टीसहित एल्बम फिर्ता पाउँ भन्दै प्रमोदले विन्ध्यवासिनी प्रालिलाई पत्राचार गरे।
पत्र पाउनेबित्तिकै बिन्दाबासीनी म्युजिक प्रा.ली.का संञ्चालक सुवास रेग्मी सामाजिक सञ्चालमा पोखिन थाले। बारम्बार सम्झौता रिन्यु गर्न आउ भनेर बोलाउँदा पनि नआएको र अहिले आफूले लगानी गरेको गीतलाई दाबी गरेको भन्दै उनी बम्किएका थिए।
उनलाई लागेछ, घरको डेरामा भाडै नतिरी ६ वर्षसम्म बस्ने अनि उल्टै घरै मेरो भन्दै दाबी गर्ने। सामाजिक सञ्जालले मात्रै नपगेर उनी प्रहरीको शरणमा पुगे।
उनले गायक प्रमोद खरेलविरुद्ध लगानीकर्ताको अनुमतिबिना गीत र ट्रयाक स्टेजमा बजाएको आरोप लगाएका थिए। लगानीकर्ताको क्षेत्राधिकार बाहिर गई मनग्य आर्थिक लाभ लिएको उनको भनाइ छ। प्रतिलिपि अधिकार धनी पक्षलाई यसले अन्याय पर्न गएको भन्दै खरेलसँग एक करोड रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्तिको माग दाबी उनले गरेका छन्।
यो विषयमा निकै छलफल भयो तर निष्कर्ष निस्कन सकेन। केही समयअघि प्रतिलिपि रजिस्ट्रारको कार्यलयमा भएको छलफलमा गीतकार संघका अध्यक्ष चुडामणी देवकोटा, रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष महेश खड्का, म्युजिक प्रोड्युसर एशोसियसनका अध्यक्ष बी.पाण्डेलगायत अन्य संगित क्षेत्रमा मानिससँगै प्रमोद खरेल सहभागी थिए।
छलफलले टुङ्गो लाउन नसकेको मुद्दा बोकेर प्रमोद आफै थाना पुगे। उनी भने घर बनाउनेले घर बनायो, रिक्सा चालकले रिक्सा चलायो भनेर मुद्दा हाल्न पाइन्छ ? भन्दै प्रहरीकोमा पुगेका थिए।
काम लगाएर ६ वर्षदेखि पारिश्रमिक नदिएको र उल्टै काम पनि दिने पैसा पनि दिने भन्नेखालको अभिव्यक्ति आएको उनको आरोप थियो।
यही आरोपमा अन्य ५७ जना कलाकारले साथ दिए प्रमोदलाई। हस्ताक्षर सहित एक साता अघि महानगरिय प्रहरी कार्यलय टेकुमा पुगे। सामाजिक सञ्जालमा गाली र धम्कीको वर्षा भइरहेको अनि आफ्नो सम्पति हडपेको भन्दै विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रा.ली.का संञ्चालकमाथि मुद्दा दायर भयो।
विन्ध्यवासिनी प्रालिका कार्यकारी अधिकृत लिना रेग्मीलाई प्रहरीले छानबिनका लागि पक्राउ गरेको छ। लिनाका श्रीमान समेत रहेका सुवास भने काठमाडौंभन्दा बाहिर भएकाले पक्राउ नगरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले बताएको छ। यो झगडा अब भने कानुनी रुपमा अदालतमा पुगेको छ।
विसं. २०५९ सालमा नेपालमा प्रतिलिपी अधिकारका ऐन नियमहरु बन्यो। त्यसमा भएका कमी कमजोरी र समयको मागलाई ध्यानमा राख्दै यो बारम्बार संशोधन पनि भइरहेको छ।
प्रतिलिपी अधिकारमा भएका बुँदाहरुलाई केलाउने हो भने, यी दुवै आ–आफ्नो ठाउँमा ठिक रहेको बताउँछन्, अहिले खोसाखोस बनिरहेको गीतका रचनाकार राजेन्द्र थापा। अब मुद्दा अदालतमा गएकाले यसबारे ठोस निर्णय हुने पनि उनको आशा छ।
के भन्छन् सुवास?
सुवास मुद्दा आफ्नै पक्षमा पर्नेमा ढुक्क छन्। प्रतिलिपी अधिकार ऐन १०५९ को परिच्छेद ५ को दफा २४ को उपदफा ३ मा प्रतिलिपी अधिकारको धनीबाट अधिकार हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिले त्यसरी हस्तान्तरण गरिलिएको बाहेक अन्य कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन भनेर उल्लेख गरिएकाले यसमा सुवासकै अधिकार रहेको उनको भनाइ छ। ‘५ वर्षसम्म त्यसरी जहाँतहाँ गीत गाएर हिँड्दा मेरो अनुमति लिनुपर्थ्यो, लिएनन्। त्यही क्षतिपूर्तिको माग मेरो छ‚’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बौद्धिक सम्पतिको कारोबार गर्ने, प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी कारोबार गर्ने अनि पुरानो करार ऐनअनुसारले सम्झौता गरेको छु भनेर हुन्छ।’
मानहानीको विषयमा पनि उनको भनाइ फरक छ। आफूहरुले ४ चोटीसम्म चिठ्ठी पठाइसकेको तर उनी नआएको सुवास बताउँछन्। उनले भने, ‘मैले कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रतिलिपी अधिकारको हनन् गर्‍यो भनेर नै १ करोडसहितको क्षतिपूर्ति माग गरेको हो, मानहानीको कुरा कताबाट आयो?
उनले आफू कानुनको भरमा रहेको पनि बताए। उनले भने, ‘मेरो गल्ती छ भने मैले सजाय पाउनुपर्‍यो।’ कानुन हरेकका लागि समान रहेको बताउँदै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष निर्णय हुनेमा ढुक्क रहेको पनि उनको भनाइ छ।
के भन्छन् प्रमोद?
गायक प्रमोद पनि निर्णय आफ्नो पक्षमा आउनेमा ढुक्क छन्। खरेलले भने, ‘गीतको सर्वाधिकार मसँग छ, एल्बमको प्रकाशन, बिक्री वितरणको पाँच वर्ष सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई ४ लाख बुझाइसकें, अब त्यो गीत मेरो हो।
आफूले रचनाकार र संगितकारसँगको अधिकार पनि पहिले नै लिइसकेको बताउँदै गीत आफ्नै भएको उनले दाबी गरे।
६ वर्षसम्म गीतबाट आएको आम्दानीको रोयल्टीसमेत प्रमोदले मागेका थिए। उल्टै उनीविरुद्ध एक करोडको क्षतिपूर्तिसहित मुद्दा परेको सुनेर आफू दंग परेको पनि उनको भनाइ छ। यसले आफूलाई मानसिक रुपमा निकै तनाव दिएको पनि प्रमोदले बताए।
मेचु धिमालको ‘मैले के बिगारें?’ सार्वजनिक गायिका मेचु धिमालको आवाजमा ‘मैले के बिगारें’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। मार्मिक र वियोगान्त गीतलाई लेखु सहयात्रीले रचना गरेकी हुन्। बुधबार, माघ १४, २०७७